Ny fizahantany any an-toerana sy isam-paritra no zava-dehibe amin'ny fanarenana an'i COVID-19 any Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fizahantany any an-toerana sy isam-paritra no zava-dehibe amin'ny fanarenana an'i COVID-19 any Afrika
Enga anie 10, 2020
Ny fametrahana ny fandaharam-pandrosoana ny fizahantany any Afrika, ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra no tetika tsara indrindra hahatonga an'i Afrika ho tokan-tena tokana, amin'ny fijerena ireo manintona mpizahatany manan-karena ao amin'ny kaontinanta.
Sekretera Kenyana misahana ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Hon. Nilaza i Najib Balala tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo fa ny fizahan-tany eto an-toerana sy isam-paritra no lakileny fanalahidy sy fomba tsara indrindra hitondra ny fizahantany afrikanina ho sitrana avy hatrany amin'ny valanaretina Covid-19.
Niresaka nandritra ny webinarin'ny mpandray anjara amin'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny any Kenya, Balala dia nilaza fa ny fampandrosoana ny fizahan-tany any an-toerana sy any amin'ny faritra afrikanina dia hametraka ny asa ifotony ho an'ny fanarenana io sehatra io. Notsongainy manokana ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra ho fanalahidin'ny hoavin'i Afrika amin'ny fampandrosoana ny fizahantany.
“Elaela vao hiarina ny tsena iraisam-pirenena, ka noho izany, tokony hanome banky an'ireo mpandeha an-trano sy isam-paritra isika. Na izany aza, ny fahafaha-miditra sy ny fahazoana miditra dia hanana andraikitra lehibe amin'izany ”, hoy izy nanamarika.
Ny fahatsapana Atoa Balala dia notohanan'i Damian Cook, mpanorina ary Lehiben'ny mpanatanteraka (CEO) an'ny E-Tourism Frontiers, ary mpanolo-tsaina iraisam-pirenena momba ny fizahantany. "Mila mizaha ireo vokatra Kenyanina isika, mijery izay mety hiasa mandritra ny fanarenana, ary hanararaotra izany", hoy i Cook.
Ny webinar, ambanin'ny faneva "Leap Forward", dia nanangona mpandray anjara miisa 500 hihaino sy hifaneraserana amin'ireo manam-pahaizana momba ny fizahantany enina eo an-toerana sy iraisam-pirenena izay nanao famelabelaran-kevitra mandroso amin'ny fizahantany Kenya.
Ireo tontonana sy manampahaizana manokana momba ny fizahan-tany ankoatra an'i Damian Cook dia i Chad Shiver, Lehiben'ny Marketing Destination ho an'i Afrika ary ny mpanolotsaina momba ny dia, ary i Alexandra Blanchard izay mpitantana ny varotra ho an'ny EMEA sy ny mpanolotsaina.
Ny manam-pahaizana hafa dia i Ninan Chacko, ny Senior Advisor, McKinsey and Company, Hugo Espirito Santos, Partner, McKinsey and Company, Karim Wissanji, Founder and Chief Executive Officer (CEO), Elewana Group, Maggie Ireri, CEO, TIFA Research Limited ary Joanne Mwangi -Yelbert, Lehiben'ny mpanatanteraka, Vondrona PMS.
Ny angona natolotry ny Head of Marketing Destination an'ny TripAdvisor ho an'i Afrika dia nanondro fa amin'ny lafiny fanarenana dia mitarika ny isan'ny mpamaly i Afrika izay 97 isan-jato no vonona hanao dia lavitra mandritra ny enim-bolana aorian'ny faran'ny Covid-19.
Ny antontam-baovao ihany koa dia nanondro fa ny ankamaroan'ny mpandeha dia nitady dia an-dalambe sy traikefa amoron-dranomasina, noho ny ahiahy momba ny fiaramanidina mitaingina sy ny filana miala sasatra, aorian'ny COVID-19.
Ity data ity dia nanohana bebe kokoa ny fiantsoana Andriamatoa Balala hifantoka amin'ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra. Ninan Chacko avy ao amin'ny McKinsey, dia niantso ny hisaintsainana indray sy hanavao ny fizahan-tany any Kenya hanana vokatra fizahan-tany maro karazana izay manome safidy sy lanja bebe kokoa ho an'ireo mpandeha.
Nanome ny ohatra ny fizahan-tany momba ny fizahantany Australia izy ary nilaza fa miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra, Kenya dia afaka mijoro ho ivon'ny fizahan-tany any Afrika Atsinanana noho ny tambajotra nasionaly sy ny fahaizany miasa ary ny fotodrafitrasa fizahan-tany mivoatra.
Kenya Airways no mpitatitra entana lehibe indrindra any Afrika Atsinanana sy Afovoany izay misy ifandraisany amin'ireo tanàna lehibe manerana an'i Afrika. Mampifandray indrindra an'i Afrika Andrefana, Afrika Afovoany, Afrika Atsinanana, Afrika atsimo ary ny Nosy fizahan-tany amin'ny Ranomasimbe Indianina Zanzibar sy Seychelles.
Hugo Espirito-Santos, avy ao amin'ny McKinsey, dia nanamarika ihany koa fa ny iray amin'ireo fomba fakana sary an-tsaina sy fanavaozana ny vokatra fizahan-tany dia ny fifantohana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany izay ahafahan'ny mpizahatany manome traikefa tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hakitroky ny fizahan-tany toy ny Maasai Mara ary fametrahana paikady izay jerena ny jeografia, ny ampahan'ny mpanjifa ary ny kolontsaina ary ny fiainana ny sakafo.
Damian Cook an'ny sisintany E-fizahan-tany, dia nanome paikady voafaritra mifototra amin'ny fihetsika, fieritreretana ary ny fanarenana mba hamerenan'ny sehatra azy ireo ary niantso ny mpilalao rehetra hamolavola paradigma vaovao ho an'ny orinasany milaza fa ny tontolo aorian'ny COVID -19 mitondra fiovana amin'ny ambaratonga tamin'ny 11 septambra 2001, fanafihana mpampihorohoro tany Etazonia.
Nilaza izy fa hampiditra ny fifanarahana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny mari-pankasitrahana Covid-19 ho an'ny firenena.
Maggie Ireri, avy amin'ny TIFA Research Limited, dia nitondra ny mpandray anjara tamin'ny valim-pifidianana an-tserasera iray izay nanome azy ireo famantarana ny alahelon'ny mpandray anjara fizahan-tany.
Pain-point izay efa natolotry ny sehatra an-dRamatoa minisitra teo aloha ary efa natolony azy ireo tao amin'ny Tahirim-bolam-panjakana Kenya mba hodinihina.
Andriamatoa Balala dia nametraka ny fandaharam-potoana enina enina izay entin'ny Minisiterany manohana an'io sehatra io, izay mampiasa Kenyana mihoatra ny 1.6 tapitrisa ary maneho ny 20 isanjaton'ny vokatra an-trano an-trano (Kenya).
Ny fandaharam-potoana momba ny fanaintainana dia nentina tany amin'ny minisitra ho an'ny fifanakalozan-kevitra dia ny Famoronana tahiry famerenana fizahan-tany momba ny fizahan-tany, ny fampihenana ny haba sy ny fihenan'ny vidim-pidirana sy ny sarany, ny fandrisihana ho an'ireo mpamatsy vola amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny tetibola fampiroboroboana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, ny fanampiana tsara sy ny fandrindrana ny sehatry ny seranam-piaramanidina. ary ny Primatiora sy ny fampiasam-bola amin'ny Conservation and Wildlife ho toy ny hazondamosina.
“Ny hevi-dehibe ananako rehefa manidy ity webinar ity aho dia ny tsy maintsy hamerenantsika sy hamerenantsika ny indostrian'ny fizahantany amin'ny daty vaovao mandroso. Mila mampiasa ny tontolon'ny nomerika mivoatra hatrany isika, manatsara ny fiarovana sy mamelombelona ny vokatra bibidia, miaro lalàna ary mijery indray ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy ny dia. ” Hoy Andriamatoa Balala.
Ny sekretera Balala dia mpikambana ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina Tetikasa fanantenan'ny tetikasa fanantenana ary manerantany Fanarenana.travel fandraisana an-tanana.
Ny drafitra fanarenana ny tetikasa ho an'ny fizahantany afrikanina dia manana drafitra stratejika izao
Ahoana no ahafahan'ny firenena voalohany lavitra any Canada tafavoaka velona amin'ny COVID-19?